काठमाडाैं / स्वयम्भू महाचैत्य परिसरका १७ वटा आवासीय घर पुननिर्माणपछि बुद्धाचार्य परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
स्वयम्भू परिसरमा रहेका काग्यु कर्मपा सम्प्रदायको कर्मराज महाविहार र स्वयम्भू महाचैत्यका बुद्धाचार्य पुजारीहरूको आवास २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको थियो ।
कर्मराज महाविहारका १७ औं अवतारी गुरु कर्मपा थिन्ले थाय दोर्जेको आर्थिक सहयोगमा स्वयम्भू पुनर्निर्माण समिति गठन गरि हाउस पुलिङ प्रणालीबाट निर्माण भएकाे हाे ।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ, काठमाडौं महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले साेमबार सम्बन्धित घरधनीलाई घर हस्तान्तरण गरेका हुन्। यस्तै, भूकम्पमा भत्किएको कर्मराज महाविहारको पनि निर्माण सम्पन्न भइ साे हस्तानतरण गरिएको छ।
हस्तान्तरणपछि बोल्दै महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले प्रतिकुल समयको चुनौती सामना गर्दै पुननिर्माण सम्पन्न भएको शुभ अवसरले हौसला बढेको बताए ।
‘अहिले राजधानीमा कुनै जीर्ण सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न थाल्यो कि विरोध गरिहाल्ने, उजुरबाजुरतिर लागिहाल्ने समूह सक्रिय भइहाल्छ । यहाँका पुजारी आवास पुननिर्माण गर्ने क्रममा काम रोक्न उजुर नपरेको होइन । तर राम्रो काम रोकिनु हुँदैन भनेर हामीले नियमितता दियौँ ।’ शाक्यले भने्, ‘यसैको परिणाम आज विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत धार्मिक स्थलमा विहार र पुजारी परिवारको घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।’
कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने क्रममा संघीय सांसद जीवनराम श्रेष्ठले विना अध्ययन, स्थानीयको सहमति विना सडक विस्तार गरिँदा सम्पदामा समेत असर परेको बताए । जथाभावि गरिएको सडक विस्तारले स्थानीयको घरमात्र होइन, मठमन्दिर, पाटी, सत्तल लगायतका धार्मिक, साँस्कृतिक, सामाजिक सम्पदाहरु समेत भत्काइएको दावी गरे ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले काठमाडाैंको मावन बस्ती विकासलाई पोखरी सभ्यतासँग जोड्दै यहाँका पोखरीलाई तराईका माछा पाल्न बनाइएका पोखरीसँग तुलना नगर्न आग्रह गरे ।
‘यसको महत्व हामीले बुझेनौँ भने कसले बुझ्न सक्छ? हामीले यिनीहरुको संरक्षण गरेनौँ भने कसले गर्न सक्छ? ’, खड्गी श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।
काठमाडौं महानगरमा हाउस पुलिङ प्रणालीबाट २०७५ पुस ३० गतेदेखि पुनर्निर्माण थालनी गरिएको यो सम्भवत पहिलो योजना भएको समितिले जनाएको छ।
महानगरका प्रवक्ता एवम् वडा १५ का अध्यक्ष इश्वरमान डंगोलको नेतृत्वमा गठन भएको पुनर्निर्माण समितिले पुरातत्व विभागको मापदण्ड अनुसार नै घरहरु निर्माण भएको जनाएको छ।
विश्व सम्पदा सूची क्षेत्रमा सूचिकृत स्वयम्भू महाचैत्य परिसरमा कंक्रिटको संरचना बनाउन लागेको भन्दै विरोध भएको थियो। युनेस्कोले समेत उक्त योजनाले स्वयम्भू महाचैत्यमा कुनै असर नपर्ने भन्दै निर्माण कार्य अघि बढाउन भनेको थियो।
पहिला घरहरु क्षेत्रफलमा निकै सानो रहेको र पुनर्निर्माण गर्दा निकै अप्ठेरो हुने देखेर सरोकारवाला र पुरातत्व विभागको स्वीकृतिमा नै कंक्रिटको प्रयोग गरेर घरहरु निर्माण गरिएको समितिका अध्यक्ष एवम् वडाध्यक्ष डंगोलले बताए।
घरको लम्बाइ नै ६ /७ फिट मात्र भएकाेले पहिला जसरी बनाउन प्राविधिक समस्या थियो। त्यसैले हाउस पुलिङबाट घरहरु बनाउन हामीले प्रस्ताव गर्‍यौं। सबैले स्वीकार गर्नुभयो डंगोलले भने।
पुनर्निर्माण समितिबाट ७० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ। घर भित्रको फिनिसिङ लगायतको काम घरधनीहरुले ने ब्यहोर्नुहुनेछ। ३० प्रतिशत खर्च घरधनीहरुको हुनेछु डंगोलले भने।
हाउस पुलिङ प्रणालीबाट दुई वर्षमा नै घर निर्माण सम्पन्न भएको उनले बताए।
LeaveaComment on हाउस पुलिङ प्रणालीबाट स्वयम्भू महाचैत्य परिसरमा पुनर्निर्मित १७ घर हस्तान्तरण
निषेधाज्ञा अवधिभर कामपाबाट अत्यावश्यक सेवा मात्र दिइने